URichard Stallman Umemezele Ukubuya Kwakhe Ebhodini Labaqondisi le-FSF | Kusuka kuLinux
URichard Stallman umemezele ukubuyela kwakhe ebhodini labaqondisi be-FSF
Zimbalwa izinsuku ezedlule enkulumweni yakhe yeLibrePlanet 2021, uRichard Stallman (umsunguli weFree Software Movement, iGNU Project, iFree Software Foundation kanye neLigi yeFree Programming, umbhali weGPL nomsunguli wamaphrojekthi afana neGCC, GDB kanye nama-Emac), umemezele ukubuyela kwakhe kwiBhodi Yabaqondisi Bamahhala BY. UJeffrey Knout, owakhethwa ngo-2020, uhlala engumongameli weFree Open Source Foundation.
Lesi simemezelo sokubuyela kwakhe ebhodini labaqondisi beFree Software Foundation sekuqubule inhlamba kwezinye izinhlangano nabathuthukisi, njengoba URichard Stallman ufakwe ngokusemthethweni ohlwini lwabaqondisi futhi lolu lwazi manje selukhonjiswa kuwebhusayithi yeFree Software Foundation.
Ikakhulu, inhlangano yamalungelo abantu Isoftware Freedom Conservancy (SFC), umqondisi wakhe osanda kuklonyeliswa lo mklomelo ngeminikelo yakhe ekwakhiweni kwesoftware yamahhala, umemezele ukuqedwa kwabo bonke ubudlelwano neFree Software Foundation nokumiswa kwanoma yimuphi umsebenzi ukuwela ngale nhlangano, kufaka phakathi i-Open Source Fund ukuxhasa umsebenzi womhlanganyeli wohlelo lwe-Outreachy (i-SFC izokwabela u- $ 6500 odingekayo kusuka ezikhwameni zayo).
Kufanele kukhunjulwe lokho URichard Stallman wasungula iFree Software Foundation ngo-1985, unyaka owodwa kusungulwe iPhrojekthi ye-GNU. Inhlangano yasungulwa ngenhloso yokuzivikela ezinkampanini okusabekayo okuvaleleke ekusetshenzisweni kabi kwekhodi nokuzama ukuthengisa amanye amathuluzi weProjekthi we-GNU akhiqizwe nguStallman nabalingani bakhe. Eminyakeni emithathu kamuva, uStallman wabhala inguqulo yokuqala ye-GPL, echaza uhlaka lwezomthetho lwemodeli yokusabalalisa isoftware yamahhala.
NgoSepthemba 2019, uRichard Stallman wesula esikhundleni njengomongameli weFree Software Foundation futhi wesula ebhodini labaqondisi bale nhlangano, njengoba asolwa futhi enecala lokuhlukumeza ngokocansi.
Isiqu seMIT sishicilele udaba ngeMedium sikhuluma ngalokhu kanti isihloko sithi "Susa uRichard Stallman»Ukucindezela ukususwa esikhundleni. Kungani? Yebo, ngamanye ama-imeyili abhalwe nguStallman enza imibono ngalelo cala lokuhlukunyezwa kukaMarvin Minsky, uprofesa we-MIT osolwa ngokuhlukumeza ngokocansi kanye nenethiwekhi yabancane eyenzeke enkampanini yase-Epstein.
Kusho uStallman kulezo imeyili ukuthi "igama elithi 'ukuhlukunyezwa ngokocansi' alicaci kahle futhi liyashelela" futhi "livele ngaphambi kukaMinsky elungiselelwe ngokuphelele." Kuyiqiniso ukuthi bekungafanele akusho lokho, kepha uRichard Stallman uqobo uzivikele ngokuthi amazwi akhe akhishwe kumongo futhi ahunyushwa ngokungeyikho: "uchungechunge lokungaqondani kanye nokuchazwa ngendlela engeyiyo." Kepha uthathe izikhalazo nezingcindezi zokuthi agcine esulile ngakho-ke lokhu akuhlakazisi umhlaba wesoftware yamahhala kanye ne-FSF.
Ngemva kwalokho UStallman ungene enkulumweni ngempikiswano yemiqondo "yodlame lwezocansi" futhi uma zisebenza kuMinsky. Ubuye waphakamisa ukuthi abahlukunyezwayo bazibandakanye ekuhwebeni ngokuzithandela.
Encwadini, uStallman Ubalule nokuthi ukudlwengula umuntu ongakabi neminyaka engu-18 okwamanje akunyanyeki kangako kunomuntu oseneminyaka engu-18 (Engxoxweni yokuqala, uStallman waveza ubuthutha bokuthi izinga lokutholakala unecala ekudlwengulweni lincike ezweni nasekuhlukaneni kweminyaka yobudala okungabalulekile).
Kamuva, ngemuva kokuzwakala komsindo emaphephandabeni, UStallman uphinde wabhala ukuthi ezitatimendeni zakhe zaphambilini wayenephutha nokuthi ukuxhumana ngokocansi phakathi kwabantu abadala nabancane, noma ngabe kuvunyelwene nomncane, akwamukelekile.
Ngenxa yalokhu, i- isinqumo sithathwe ngemuva kwezinsolo zokuziphatha okungafanelekile kusuka kumholi wenhlangano ye-FOSS kanye nezinsongo zokunqamula ubudlelwane nenhlangano ye-FOSS kweminye imiphakathi nezinhlangano. Ngemuva kwalokho, kwenziwa imizamo yokwehlisa ithonya likaStallman kwiProjekthi ye-GNU, lapho agcina khona ubuholi, kepha lokhu akuphumelelanga.
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho Mayelana nokumenyezelwa kukaRichard Stallman, ungabona imininingwane enkulumweni ayinikezile Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » URichard Stallman umemezele ukubuyela kwakhe ebhodini labaqondisi be-FSF
Ubhekilanga: Isihloli Esincane Sefayela Lefasitela Elincane le-Linux
IFirefox 87 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo